Super Wholesale Super concentrated EM bacteria na-emepụta na ndị na-eweta ngwaahịa | Junyu Pharm
Oxytetracycline ogwu ogbugba
Ihe mgbagwoju anya AMINOVB
Super Gasomil - JS ntụ ntụ
Super lekwasị EM bacteria
Curecocci Kachasị Amprolium Sulphaquinoxaline Vitamin WSP
DoxTylo 25 Tylosin Doxycycline Mmiri Mgbaze Mmiri
Nutrition GREAT GROWTH WSP Vitamin Mmiri Soluble Powder
Albendazole 10% Albendazole Suspension Oral Solution
Ciprofloxacin HCL 10% Ngwọta Oral
Enrofloxacin 10% Enrofloxacin Oral Ngwọta
Nutrition Vitamin E + SE Ngwọta Oral
Bacillus subtilis, Candida utilis, photosynthetic bacteria, nitrifying bacteria, lactic acid bacteria, actinomycetes, enzymes nọ n'ọrụ, ihe ndị na-akpata trophic, photosynthetic catalysts, oxygen activators, activators.
A na-ejikarị azụ, oporo, nshịkọ, kukumba oké osimiri, eel, mbe, mbe, frog, eel, eju, mọsel na akpụrụ mmiri pụrụ iche.
Meziwanye mma mmiri na sedimenti:
Belata mmiri na amonia nitrogen, nitrite, hydrogen sulfide, organic okwu (mmapụta nri idide, feces, kwụsịtụrụ solids) na ndị ọzọ na-emerụ bekee, ụzọ abụọ ukpụhọde nke onye Onyenwe anyị. Iji gbochie mgbanwe mmiri (mmiri agba agba ọbara ọbara, nwa, thickened, doro anya), arịa ọrịa nke ọnọdụ.
Idozi nje bacteria na-adọ na algae adọ:
Na-egbochi uto na mmepụta nke nje, na-akwalite uto na mmeputakwa nke nje bara uru. Na-akwalite algae na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, diatoms na uru algae ndị ọzọ bara uru, igbochi algae, cyanobacteria na algae ndị ọzọ na-emerụ ahụ nke ozuzu, iji kwado abụba mmiri, dịrị ndụ, dị nro, dị jụụ.
Ojiji na onunu ogwu
Wụfuru na ọdọ mmiri:
Gwakọta 100g ngwaahịa a na mmiri 5kg, wụsara n'ala na 10000 ~ 12000m2 mmiri, otu ugboro maka ụbọchị 15.
Maka oge mbụ, kwesịrị iji usoro onunu ogwu abụọ.
Mgbe mmiri mma arịa ọrịa, kwafuru evenly na 6666 ~ 10000m2 mmiri, nwere ike n'ụzọ dị irè mma mmiri mma.
Jiri ngwaahịa a mgbe ụbọchị 3 kemgbe disinfection.
Nsonaazụ a ga-ada ụbọchị anwụ na-acha.
Ngwaahịa nke microorganisms na-arụ ọrụ na ọnọdụ ụra, na-enyekwu aka maka nkwụsi ike ngwaahịa.
100g / akpa
Nke gara aga: Mbadamba oxygen
Osote: Super Gasomil - JS ntụ ntụ
Ifịk ifịk Oxygen Mbadamba Sodium Percarbonate Mbadamba maka aquaculture
oxic Gas Water ọgwụgwọ maka aqua Culture
Oxygen mbadamba maka aquaculture
Ngwa ngwa oxygenic mbadamba Aquaculture Azụ na oporo